Jen. Kamaal Galchuu Ummata Oromoo Dhiifama Gaafatuu Qaba – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooJen. Kamaal Galchuu Ummata Oromoo Dhiifama Gaafatuu Qaba
Jeneraal Kamaal Galchuu Ummata Oromoo Dhiifama Gaafatuu Qaba
Barroo Goobeetiin, Waxabajii 16, 2020
Sababni kana jedhuuf gaafii fi deebii Jeneraal Kamaal Galchuu tibbana miidyaa OBN wajjiin taasisee dha. Akkumma namni hedduun quba qabutti, Aminesty International dhaabatni mirga dhala namaa (haqa, bilisummaa, dhugaa, fi kabajaan ummataa) akka hin waakkatamne tiksu, gabaasaa ajjeechaa, hidhaa, dubartii gudeeduu fi que’ee buqqisuu Raayyaan Ittisa Itoophiaa (RII), humnoota tikka nagayaa naannoo wajjiin, ummata naannoo Amaraa Qimaantii fi Oromiyaa irratti raawwaate gabaasa Caamsaa 29, 2020tin ifa baasee jira. Kanaan walqabatee Jeneraal Kamaal Galchuu OBN irratti mul’atuun, gabaasaa Amnestiin baasee kana madaalawaa miti jechuu bira darbee soba jechuun mormii fi komii akka qabu dubbate. Mormiin inni kaase guddaan waa lama:
Ajjeechaan gara tokkoo qofaa miti ka raawatamaa jiru.
Nama du’e kanaaf, akkumma nama du’e laakkofsa hagana jedhame, maqaa qabatamaa wajjiin dhiyeessuu feesisa. Amnesty namoota du’aan jedhan kana maqaa waan hin baasiniif gabafnuu soba kan jedhu.
Komiin kaasaman kun, kan nutti agarsiisu Oromoota seeraan ala ajjeefaman, hidhaman, mannii jalaa gubamee, fi araddaa ykn qe’ee isaanii irraa buqa’aman kanaaf Jeneraal Kamaal Galchuu garaa-nyaatoo yookiin quuqaamaa akka hin qabne mul’ise. Akkasumas, sababni inni tarreesse kunnin waan dhugaa irratti hundaawaan odoo hin taane, jibbansaa fi hinaafaa ABOtiin kan guutame dha. Sababa kanaaf dubbiin Jeneraal Kamaal fudhatama hin qabdu-namaa hin amansiisu.
Tokkoffaa, Amnesty International dhaabbata haqaaf dhaabate. Dhaabbata adunyaa guututti kabajaa guddaa horatee dha. Gabaasaa isaa sirritti qoratee ragaa irratti hundayee dhugaa tayuu eega qulqulleefate booda kan gabaasu waan tayeef, namni mirgi dhala namaa akka hin sarbamneef quuqamu kamuu gabaasa kana hafuuraa gaarii fi qalbii gammachuutiin simmata jedheen amana. Keessattuu, namni Oromoo gabaasa kana sababni dura dhaabbatuuf tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu. Kan dura dhaabatan, namoota sabaa isaatiif hin yaadnee fi Abukaatoo (xabaqaa) mootummaa kan akka Taayyee Danda’aa fi Jibriil Muhammad yoo tayan malee.
Maaliif, kan ajjeefame, hidhame, sarbame, gudeedame jedhame ummata Oromooti. Keessattuu, ummata keenna ka Gujiiti. Gocha sukanneessaa nyaaphni, mootummaan Habashaa, ummata keenna irraan gayaa jiru fi dhoksu gabaafni kun adunyatti saaxile-ifa baase. Dhugaa Oromoo baase. Dhugaan Oromoo ifa bayutti kan aaru, nayu, komatuu, fi mormu qaamuuma gocha sukanneessaa kana ummata irratti dalage- mootummaa Habashaa paartii bilxiginnaatiin durfamtu qofa.
Garuu, Jeneraal Kamaal dhaaba addunyaa keessatti amantummaa qabuu kana shakkuu fi gabaafni innii baase madaalawaa miti, soba, fi loogii godha jechuun, namoota Oromoo ka mootummaan dararaa irraan gaye saniif gara-nyaatoo dhabuu agarsiisa. Ammallee, gabaasaa Amnesty International kana dura dhaabbachuun General Kamaal, wanni nu agarsiisu akka innii dantaa ummaataa Oromootii haajaa hin qabnee fi akka dantaa mataa isaatii fi paartii isaa qofa gabbisuuf (political expediency) waan hin mallee odeessu yookiin dalagu dha.
Lammaffaa, gaafiin Jeneraal Kamaal gaafatame, “Ibsaa Amensty International baasee mootummaan immoo sirrii miti dogoggora qaba jedhee qeeqaa jira, mee kana “lamaan” isin akkamitti laaltan?” kan jedhu. Asi irratti “lamaan” jechuun ibsa Amensty fi deebisaa mootummaa jechudha. Jeneraal Kamaal garuu qaama sadi godhe: Amensty, mootummaa, fi ABO. Sababni inni kana godheef rakkina ABO wajjiin qabu, gabaasa kanan walqabsiisee, gadoo kana keessa bayuu barbaadeti. Kanaaf, deebii gaafatamee gara birratti jallisee, “Qaama qabsoo karaa nagayaa hordofa jedhee biyyatti gale, ka gama tokkoon nagaya, miila tokkoon bosona filatetu jira” jedha. Kanaaf “ajjeechaan gara tokkoo qofaamiti kan raawatamaa jiru” jedha. Kanaaf, “miseensa dhaba isaani nama Ummar Mohammed ykn Leemoo jedhamu akka ABO ukkaamsee butanii deemanin” jedha. Kanaaf, “hojjataa mootummaa meeqatu ajjeefama? Ka ani beekuu hojjii irraa yoo ture” jedha. Kanaaf, ajjeechaan gama ABOtiin tayee ka ani beekuu waan hin gabafaminiif, gabaafni Amnisty soba” jedha. Gabaafni kun ABO loogii godha Jeneraal Kamaal. Kanaaf, “Jumlaan mootummaa ajjeechaa, hidhaa fi dararaa jechaan dhugaa miti, soba, fi dharan nama yakkuudha jedha” Jeneraal Kamaal Galcuu.
As irratti waan beekamuu qabu, sababa ajjeechaa namootaa Jeneraal Kamaal beekuu gabaasaa Amnesty kana keesaatti ammatamuu dhabuuf, gabafni kun soba hin tayu. Namni gabaafni Amnesty International gocha suukannessaa “mootummaan Habashaa’ ummata keenna irratti raawwaatu maraa baase jedhee yaaduu hin jiru. Akkumaa gabaasa Amnesty irraa namni maruu hubatuu dandayutti, waanni gabaafame bayyee xiqqoodha-sunuu dararaa Gujii keessatti raawwatame qofa. Jeneraal Kamaal, akka nama paartii ijaaratee ummata Oromootiif qabsaawaa jedhu tokkotti, kan godhuun malee gabaasaa kana akka dhugatti fudhatee, waan irraa ir’ate dabalee himuu dha. Kanaaf, hojiin isaa kan ta’uu qabu, namoota karaa maleen ajjeefaman ka inii beekuu san akka gabaamafuu taasisuu dha.
Sadaffaa, “Nama du’e kanaaf, akkuma du’ee nama laakkofsa hagana jedhame, maqaa qabatama wajjiin dhiyeessuu feesisa. Amnesty namoota du’aan jedhan kana maqaa waan hin baasiniif gabafnuu soba”, jedha Jeneraal Kamaal. Gabaasa. Amensty kanaan soba jechuun, mootummaan mirga dhala namaa hin cabsuu jechudha. Mootummaan Goobanoota haarawwanii fi Nafxanyootaa kan Abiy Ahmadiin hoogganamu kun ummata Oromoo hin ajjeessu, lafarraa hin buqqisu, gocha sukkaneessaa hamaa fi hammaataa rawwataa hin jiru jechudha. Ajjeechaan seeraan alaa nama 39, ka mucaa waggaa 17 Seid Sheriff dabalate irratti raawwatame jedhee Amnesty International baase sun hin taanne jedhcudha, akka ilaalcha Jeneraal Kamaalitti. Dhugaan akka Jeneraaltichi jedhu kana miti. Ibsi Amnesty kun maqootaa namoota ajjeefaman, reebamaan gudeedama hanga tokkoo maqaan waliin baase.
Dhuma irratti, koomii fi mormiin Jeneraal Kamaal gabaasaa dhiitama mirga dhala namaa irratti qabu kun dhugaa irratti ka hundaawee miti. Akkasumas, fedhii fi bu’aa ummata Oromoo qalbii keessa kan galchee miti. Ilallachi Jeneraal Kamaal kun jibbansaa fi hinaafaa ABO irraa qabuun waan hagugame. Rakkoo dhunfaan ABO wajjii qabuu ibsa mirga dhala Oromoo dhiitamuu wajjiin wal qabsiisuun dogoggora. Ka ABOn ajjeese hin gabaafamnee, kanaafuu gabaafni Amnesty International kan dhugaa Oromoo baaseen soba jechuun immoo badii gudda dha. Waan kana tayeef, Jeneraal Kamaal Galchuu Hamdaa gowwummaan waan hin fakkaanne odeesuu dhiisee gamnummaan dogongora isaa fudhatee ummata Oromoo dhiifama gaafatu qaba.
OMN: Gadameessa Madaaye Waxabajjii 12, 2020